महाभारत खण्ड १ - विकिपुस्तक
महाभारत खण्ड १
चन्द्रवंश देखि कुरुवंश सम्म को उत्पत्ति[सम्पादन]
पुराणहरुका अनुसार ब्रह्माजीदेखि अत्रि, अत्रिदेखि चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि बुध, र बुधदेखि इलानन्दन पुरूरवाको जन्म भयो। पुरूरवादेखि आयु, आयुदेखि राजा नहुष, र नहुषदेखि ययाति उत्पन्न भए। ययातिदेखि पुरू भए। पूरूका वंशमा भरत र भरतका कुलमा राजा कुरु भए। कुरुका वंशमा शन्तनुको जन्म भयो । शन्तनुदेखि गंगानन्दन भीष्म उत्पन्न भए। उनका दुइ साना भाइ थिए - चित्रांगद र विचित्रवीर्य। यी दुर्इ भाइ सत्यवतीका गर्भदेखि उत्पन्न भएका थिए। शन्तनु स्वर्गलोक गए पछि भीष्मले अविवाहित रहेर आफ्ना भाइ विचित्रवीर्यको राज्य सञ्चालन गरे । भीष्म महाभारतका एक प्रमुख पात्र हुन् । आफ्ना पिताले दिएकाे वचन पालना गर्न यिनले आजीवन ब्रह्मचर्यको व्रत लिएका थिए। यिनलाई इच्छामृत्यु को वरदान प्राप्त थियो।
एक पल्ट हस्तिनापुर नरेश दुष्यन्त आखेट खेलन वन मा गये। जुन वन मा उनि शिकारको लागि गयेका थिए त्यसै वनमा कण्व ऋषि को आश्रम थियो। कण्व ऋषि को दर्शन गर्न को लागि महाराज दुष्यंत उनको आश्रम पुगे। पुकार गरे पछि एक अति लावण्यमयी कन्या आश्रम देखि निस्केर भने, “हे राजन्! महर्षि त तीर्थ यात्रामा गयेका छन्, तर तपाईंलाई यस आश्रम मा स्वागत छ।” कन्या को कुरा सुनेर महाराज दुष्यंत ले सोघे, “बालिके! तपाईं को हों?” बालिका ले भने, “मेरो नाम शकुन्तला हो र म कण्व ऋषि को छोरी हूँ।” कन्याको कुरा सुनर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित भएर भने, “महर्षि त आजन्म ब्रह्मचारी हो फेरि तपाईं उनको पुत्री कसरि?” उनको प्रश्न को उत्तर मा शकुन्तलाले भने, “वास्तवमा मेरो माता-पिता मेनका र विश्वामित्र हुन्। मेरी माता ले मेरो जन्म हुदै नै मलाई वन मा छोडदिएका थिए जहाँ शकुन्त नामक पक्षी ले मेरी रक्षा गर्यो। त्यहिभएर मेरो नाम शकुन्तला रहन गयो। त्यसपछि कण्व ऋषि को दृष्टि म मा पर्‌यो र उनिले मलाई आफ्नो आश्रम मा लिएर आउनु भयो। उनले नै मेरो भरन-पोषण गरे। जन्म दिन वाला, पोषण गर्ने तथा अन्न दिन वाला – यो तिनै नै पिता हुन्। यस प्रकार कण्व ऋषि मेरो पिता भए।”
शकुन्तला को वचनहरुलाई सुनेर महाराज दुष्यंत ले भने, “शकुन्तले! तिमी क्षत्रिय कन्या हो। तिम्रो सौन्दर्य देखेर मेरो हृदय तिमीलाई अर्पित गरिसकेको छु। यदि तिमीलाई कुनै प्रकार को आपत्ति छैन भने म तिमी संग विवाह गर्न चाहन्छु।” शकुन्तला पनि महाराज दुष्यंत मा मोहित भइसकेका थिए, अतः उनले आफ्नो स्वीकृति प्रदान गरिन्। दुवैले गन्धर्व विवाह गरे। केहि समय महाराज दुष्यंतले शकुन्तला संग वन मा नै व्यतीत गरे। फेरि एक दिन उनि शकुन्तलालाई भने, “प्रियतम! मलाई अब आफ्नो राजकार्य हेर्न को लागि हस्तिनापुर प्रस्थान गर्न छ। महर्षि कण्व तीर्थ यात्राभट फर्किए पछि म तिमीलाई यहाँ देखि विदा गराएर आफ्नो राजभवन मा लानेछु।” यति भनेर महाराजले शकुन्तलालाई आफ्नो प्रेम को प्रतीक को रूप मा आफ्नो स्वर्ण मुद्रिका दीएर हस्तिनापुर गये।
एक दिन उनको आश्रम मा दुर्वासा ऋषि आए। महाराज दुष्यंत को विरहमा लीन भएको कारण शकुन्तलाले उनको आगमन को ज्ञान पनि पाएनन् र उनले दुर्वासा ऋषि को यथोचित स्वागत सत्कार गरेनन्। दुर्वासा ऋषि ले यसलाई आफ्नो अपमान सम्झेर , क्रोधित भइ भने, “बालिके! म तलाई शाप दिन्छु कि जसको ध्यान मा लीन भएर तैले मेरो निरादर गरेको छस्, त्यसले तलाई भूल्नेछ।” दुर्वासा ऋषि को शार्प सुनेर शकुन्तला को ध्यान टूट्यो र उनको चरणमा गिरेर क्षमा प्रार्थना गर्न लागीन्। शकुन्तला को क्षमा प्रार्थना देखि दुर्वासा ऋषि ले भने, “राम्रो यदि तेरे नजिकै उनको कुनै प्रेम चिन्ह हुनेछ भने त्यही चिन्ह हेरेर उसलाई तेरो याद आउनेछ।”
महाराज दुष्यंतसङ्गको को सहवासबाट शकुन्तला गर्भवती भईन्। केहि समय पश्चात् कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा देखि फर्के तब शकुन्तला ले उनलाई महाराज दुष्यंत संग आफ्नो गन्धर्व विवाह को विषय मा भने । यस मा महर्षि कण्व ले भने, “पुत्री! विवाहित कन्या पिता को घर मा रहन उचित छैन। अब तेरो पति को घर नै तेरो घर हो।” यति भनेर महर्षि ले शकुन्तलालाई आफ्नो शिष्योंसंग हस्तिनापुर पठाईदिए। बाटोमा एउटा सरोवरमा नुहाउदा महाराज दुष्यंतले दीएको शकुन्तला को अँगूठी, जुन कि प्रेम चिन्ह थियो, सरोवर मा खस्यो। त्यो अँगूठीलाई एक माछाले निलीदियो।
महाराज दुष्यंत को नजिकै पुगएर कण्व ऋषि को शिष्यों ले शकुन्तला को उनको अगाडी खडी गरेर को कहा, “महाराज! शकुन्तला तपाईंको पत्नी छ, तपाईं यसलाई स्वीकार गर्नुहोस।” महाराज त दुर्वासा ऋषि को शाप को कारण शकुन्तला को विस्मृत गरेर चुके थिए। अतः उनले शकुन्तला को स्वीकार गरेन र उन मा कुलटा भएको लाँछन लगान लगे। शकुन्तला को अपमान होते नै आकाश मा जोरों को बिजुली कडक उठी र सबै को अगाडी उनको माता मेनका उसलाई उठयो ले गई।
जस माछा ले शकुन्तला को अँगूठी को निगल लिएको थियो, एक दिन त्यो एक माझिहरु को जाल मा आ फँसी। जब माझिहरु ले उसलाई काटयो त उनको पेट अँगूठी निकली। माझिहरु ले उन अँगूठी को महाराज दुष्यंत को नजिकै भेंट को रूप मा भेज दिए। अँगूठी को देखते नै महाराज को शकुन्तला को स्मरण हो आयो र उनि आफ्नो कृत्य मा पश्चाताप गर्न लगे। महाराज ले शकुन्तला को धेरै ढुँढवाया किन्तु उनको ठेगाना हैन चला।
केहि दिनहरु पछि देवराज इन्द्र को निमन्त्रण पाउएर देवासुर संग्राम मा उनको सहायता गर्न को लागि महाराज दुष्यंत इन्द्र को नगरी अमरावती गये। संग्राम मा विजय प्राप्त गर्न को पश्चात् जब उनि आकाश मार्ग देखि हस्तिनापुर लौट रहे थिए त मार्ग मा उनलाई कश्यप ऋषि को आश्रम दृष्टिगत भयो। उनको दर्शनहरुको लागि उनि वहाँ रुक गये। आश्रम मा एक सुन्दर बालक एक भयंकर सिंह संग खेल रहयो थियो। मेनका ले शकुन्तला को कश्यप ऋषि को नजिकै लाकर छोडयो थियो तथा त्यो बालक शकुन्तला को नै पुत्र थियो। उन बालक को देख गरेर महाराज को हृदय मा प्रेम को भावना उमड पडी। उनि उसलाई गोद मा उठाने को लागि अगाडी बढे त शकुन्तला को सखी चिल्ला उठी, “हे भद्र पुरुष! तपाईं यस बालक को न छुयें अन्यथा उनको भुजा मा बँधा काला डोरा साँप बनएर तपाईंलाई डस लेगा।” यो सुन गरेर पनि दुष्यंत स्वयं को न रोक सके र बालक को आफ्नो गोद मा उठयो लिया। अब सखी ले आश्चर्य देखि देख्यो कि बालक को भुजा मा बँधा काला गंडा पृथ्वी मा गिर गएको छ। सखी को ज्ञात थियो कि बालक को जब कहिल्यै पनि उनको पिता आफ्नो गोद मा लेगा त्यो काला डोरा पृथ्वी मा गिर जायेगा। सखी ले प्रसन्न हो गरेर समस्त वृतान्त शकुन्तला को सुनाया। शकुन्तला महाराज दुष्यंत को नजिकै आई। महाराज ले शकुन्तला को पहिचान लिया। उनले आफ्नो कृत्य को लागि शकुन्तला देखि क्षमा प्रार्थना गरे र कश्यप ऋषि को आज्ञा लिएर उसलाई आफ्नो पुत्र सहित आफ्नो साथ हस्तिनापुर ले आये। महाराज दुष्यंत र शकुन्तला को उन पुत्र को नाम भरत थियो। त्यस पछि उनि भरत महान प्रतापी सम्राट बने।
"https://ne.wikibooks.org/w/index.php?title=महाभारत_खण्ड_१&oldid=16302" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १४:२५, २२ सेप्टेम्बर २०१९ मा परिवर्तन गरिएको थियो।